SomaliaReport: Somaliland Ka Baqaysa Weerar Sannad Guuraddeda
Saraakiisha amaanka ee Soomalailand ayaa saadaalin ka bixiyey suuro-galnimada qaraxyo argagixiso oo uga yimaadda dablay ku lug xidhan malayshiyada Al-shabaab xilli ay jamhuuriyadda Soomalailand u dabaaldagayso sanadguuradadeedii labaatanad ee ka soo wareegtay maalinkii ay gooni isaga taagtay dalka Soomaaliya.
Sarkaal nabad-sugid o ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in ciidamada amaanka la amray inay ka feejignaadan weeraro maalinka arbacada oo ah xuska munaasabadda madaxbanaanida. Xukuumadda ayaa aaminsan inay munaasabaddani u noqon karto kooxaha argagixiso fursad ay weeraro kula beegsadaan hay’adaha , xarumaha iyo meelaha ay dadka caalamiga ahi ku sugan yihiin.
Ciidamada amniga ayaa wada koormeerid joogto ah iyo dib u xoojin dhamaan meelaha looga baqayo in la bartilmaameedsado tan iyo bishii October ee sanadkii 2008ka, xilligaas oo qaraxyo xooggan ay gilgiloeen gobolka. Dhanka kale, maamulka Soomaaliland ayaa soo dhaweeyey dilkii dhawaan loo gaystay Usaama Bin Laadin. Arintaas oo sare u qaadday dareenka laga qabo in gobolka qaraxyo kale lala beegsado. Ilo-wareedyo ku dhaw xarakada Al-shabaab ayaa u sheegtay wargayska Somalia Report in maamulka Hargaysa uu ku jiro liiskooda koowaad ee la bartilomaameedsaday.
Hanjabaadaha ka soo yeedha ururka Al-shababa ayaa macquul gal ah maadaama saddexdii bilood ee u danbaysay magaalooyinka Hargaysa iyo Burco lagu soo sheegay xubno qarsoon o ururkaa ku lug xidhan, taasoo keentay in dad badan la soo qabqabto.
Khilaaf-beeleed soo kala dhex galay hoggaanka sare ee Al-shabaab ayaa keenay in hoggaanka ururka Abu Zubayr (Axmed Godane) oo ka soo jeeda gobolada waqooyi uu loolan kala soo gudboonaaday hoggaanka intiisa kale, waxaana loo soo bandhigay inuu hawlgalo ka fuliyo gobolada waqooyi ee uu ka soo jeedo.
Xukuumada Soomaaliland ayaa qorshaynaysa gaardis laga so bilaabayo jaamacadda Hargaysa laguna soo marayo xarunta madaxtooyada, halkaas oo uu uga soo biiri dono madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo.
Xukuumadda Soomaaliland ayaan ilaa iyo hadda helin wax aqoonsi ah in kastoo in dhawayd ay beesha calaamku si gooni ah diiradda u saartay goboolkan una qoondaysay deeq lagu doonayo in xasiloonida is maamul goboleedkan lagu sii adkeeyo.